izay nisian’ny fifanarahana tamin’ny firenena mikambana mikasika ny fiovaovan’ny toetr’andro. Efa tena miditra amin’io ny firenena manerana izao tontolo izao ankehitriny ary saika efa mandray ny andraikitra tandrify azy. Misy fiakarana be ny maripana manerantany (température globale) ka misy fiantraikany mahatonga ny fikorontanan’ny toetr’andro ankapobeny. Any amin’ny firenena hafa dia miakatra be ny hafanana, any amin’ny sasany indray dia tena mangatsiaka be tsy araka ny tokony ho izy ary misy aza moa dia tena mahery vaika ny tondra-drano sy rivodoza. Raha ny eto Madagasikara manokana dia tena marefo amin’ny fiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro noho ny fahantrana lalina. Efa iaraha-mahita anefa fa efa miaina an’izany ny firenena tahaka ireny oram-be sy hain-tany mihoapampana nandalo teto ireny. Fiomanana ity atrikasa ity satria isan-taona dia misy hatrany ny fikaonan-doha iresahan’ny firenena rehetra nanao sonia tamin’ny COP 24 ny tokony hiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro. Mihazakazaka ny fotoana ary kely sisa ananana, hoy ny tatitra nataon’ny fikambanana momba ny fiovaovan’ny toetr’andro (GIEC) tamin’ny oktobra farany teo ka sao tara fiomanana ka rehefa tojo ny loza vao tsy afa-manoatra intsony. Tsiahivina fa any Pologne no atao ny fikaonan-doha amin’ny volana desambra ho avy izao ary hanana solontena any ny Malagasy.